आठ अर्बको सर्वाधिक ठूलो आइपीओ माघ २ गतेदेखि, कति पर्छ …… – Ramro Samachar
By राम्रो समाचार	 On Jan 4, 2021 236 0
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सर्वाधिक ठूलो ८ अर्बको आइपीओ माघ २ गतेदेखि जारी हुने भएको छ । बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेले माघ २ गतेबाट आइपीओ निष्काशन गर्न लागिएको बताए । ‘माघ २ गतेदेखि निष्काशन हुन्छ, भोली आव्हान पत्र निष्काशन गर्दैछौं ।’ निमित्त सिइओ पाण्डेले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
नेपालको सार्वजनिक निष्काशन इतिहासमा यो सबै भन्दा ठूलो आइपीओ हो । ८ अर्बको आइपीओ निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुग्नेछ । नेपालका ठूला विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्न भन्दै सरकारको अगुवाई र निजी क्षेत्रको सहभागीतामा यो बैंकको स्थापना भएको हो । भर्खर आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर संस्थापक सिइओ अनिल ज्ञवाली विदा भएका छन् । डेपुटी सिइओ भुपेन्द्र पाण्डेले निमित्त सिइओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बैंकले बिक्रि प्रबन्धकमा एनआइबीएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
कति भर्ने ? कति पर्छ ?
बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्छ । एक सय रुपैयाँ मूल्य अंकित ८ करोड कित्ता सेयर निष्काशन हुने भएपछि आवेदन गर्ने सबैलाई पर्ने कुरा निश्चित छ । धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले पुगेसम्म सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर दिनुपर्छ । माग भन्दा बढी आवेदकले आवेदन गरेको अवस्थामा पनि गोलाप्रथाद्धारा नै १०।१० कित्ता बाडफाँट गर्नु पर्छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओका हकमा भने सबै आवेदकले १० कित्ता भन्दा बढी सेयर पाउनेछन् । पछिल्लो पटक निष्काशन गरेको प्रभु लाइफको आइपीओमा सर्वाधिक १० लाख ८२ हजार २ सय २९ वटा आवेदन परेको थियो । सो मात्राको आवेदनबाट जम्मा २ करोड ९३ लाख ६७ हजार २ सय ४० कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो । अर्थात जम्मा २ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । इन्फ्रास्ट्रक्चरको निष्काशन नै ८ अर्बको छ ।
११ लाख आवेदन परेको अवस्थामा पनि प्रत्येक आवेदकले ७० कित्ता भन्दा बढी सेयर पाउनेछन् । पछिल्लो समय १० कित्ता आवेदन गर्ने लहर चलेको छ । तर यो आइपीओमा भने १०० कित्ता आवेदन गर्दा उपयुक्त हुने बताइन्छ । अर्थात यो आइपीओ सबै आवेदकलाई कम्तिमा पनि ७० कित्ता पर्न सक्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा २३ लाख डिम्याट खाता छन् । तिमध्ये प्राथमिक सेयर निष्काशनमा भने १० लाख ८२ हजार भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् ।
सनराईज यूबाक्लबकाे दाेस्राे बार्षिक उत्सवमा खूल्ला भलिबल तर्फ प्यानथेरा पहिलाे स्थान…….